Sheekh Dirir: Qofka wax waaninayaa waa inuu daacad ka yahay | Berberanews.com
Home WARARKA Sheekh Dirir: Qofka wax waaninayaa waa inuu daacad ka yahay
Sheekh Dirir: Qofka wax waaninayaa waa inuu daacad ka yahay
Hargeysa-(Berberanews)- Sheekh Maxamed Sh Cumar Dirir ayaa u soo jeediyey bulshada inaan waanada culimadda keliya laga sugin, balse loo baahan yahay in qof walba kaalinta uu ku leeyahay ka qaato gudashadeeda.
Khudbadi Jimcaha ee shalay oo Sheekh Dirir kaga hadlay Muhiimadda Waanada ayaa sheegay inuu jimcahii hore ka hadlay sida looga hortago xumaanta, manta waxaynu ka hadlayna waxyaalaha sharcigu inoo baneeyey si looga hortago waxaana ka mid ah wacdiga, waanada iyo wax-sheega.
Dadka muslimiinta waxuu sharcigu farayaa, waajibna isugu leeyahiin inay is-waaniyaan oo wax-isu-sheegaan, sheydaankuna waxuu kaga soo horjeeda waswaaskiisa, si uu wacdiga uga jeediyo.
Sheekh Dirir ayaa sheegay in muhiimada wacdigu leeyahay daraadeed Ilaahay SW quraanka 25 meeloo kaga hadlay, Ilaahay SW adoomaha markuu la hadlayo waxuu yidhaahda ‘Ilaahay SW ayaa waxa wanaagsan ee u idiin sheegay idinku waaninaya’ ama aayad kale ‘Ilaahay SW waxii ugu wanaagsanaa ayuu idiin sheegaya, oo idinku waaninayaa’.
Rasuulka SCW iyo Rusushaba shaqadoodu waxay noqotay waanada, wax-sheega iyo quluubta baraarujinteeda.sida Ilaahay aayad ugu sheegay Rasuulka SCW “Dadka dhinaca xun u socda iskaga sii jeedso, laakiin waani (waa munaafiqiintii).
Ilaahay SW waxuu Quraanku inoo sheegay waanada in waalidka xaqa loogu leeyahay oo caruurta canaan, huruuf iyo hanjabaad keliya aan lagula dhaqmin ee waanada lagula dhaqmo si qalbigooda loo baraarujiyo, iyagoo soo jeeda, sida tusaale la inooga dhigay Luqmaanul xakiim, oo inankiisa waaninaya “Waxaad dadka u sheegtaa Luqmaan oo inankiisa waaninaya”.
Sheekh Dirir ayaa sheegay in xaasaska ninka loo baahan yahay inuu waaniyo xaaskiisa, ooriduna, sidoo kale waaniso xaajigeeda, waxaanu yidhi,
“Ilaahay SW ayaa yidhi ‘Waaniya’ qalbigii qofkii jeestay ayaa la soo jeedinayaa, dadka qaarkood ayaa sidaa ku debca, hadii hadalka lagu adkeeyana dida.
Wacdiga iyo waanada Ilaahay SW ummada oo dhan ayuu farayaa, madaxda, riciyadda, maaha hawl Culimadda keliya saaran, sida Ilaahay SW inoo sheegay, innaguna baraarujinayo, ee aayaadka badan inoogu sheegayo.
Sheekh Dirir ayaa sheegay in wacdigu faa’iidooyin leeyahay, loona baahan yahay in qof walba waxuu sheegi karo sheego, xumaantana la suuliyo. Waxaana faa’iidooyinka ka mid ah
Qofkii xumaanta faafinayey in laga joojiyo, oo dad badan marka ay waaniyaan waxa dhacda inuu qof maqlo oo joojiyo.
In dadka is-ilowsan ee aduunyadu jiidatay in lagu baraarujiyo
In qofkii iimaanka daciifay wacdigu sare u soo qaado.
Qofka hanuunsan inuu iimaanka u sii xoojiyo
Wacdiga Adoomadu waxuu si fiican u baraa Ilaahay SW oo ku xidhaa.
Marka wacdigu bato dadku iyagoon dugsiyo diinta ka baran ayey aqoon fiican u yeelanayaan.
Sheydaanka iyo asxaabtiisa ayaa lagaga badbaada shirqoolkooda wacdiga
Sheekh Maxamed ayaa sheegay in wacdigu leeyahay aadaab iyo asluub oo culimadu bayaamiyeen, waxaana ka mid ah
Qofka wax waaninaya awaa inuu daacad ka yahay oo Ilaahay SW dartii ula jeedaa wacdiga uu dadka u sheegayo.
Qofku inuu aqoon u leeyahay waxuu dadka u sheegayo, oo aanu khaldayn daliilkiisa. Cali bani Abi Daalib RC ayaa soo maray nin dadka wacdinaya marka ayuu weydiiyey ‘Ma kala taqaana quraanka aayadaha la nasakhay iyo kuwa wax nasakhaya’ marka ayuu yidhi ‘maya’ Cali Rc ayaa ugu jawaabay ‘Adiguna waad is-halaagtay, dadkiina waad halaagtay’
Qofka dadka waaninaya waa inuu u debciyo sidaa ayuu Rasuulku SCW u sheegay asxaabtii uu dadka u dirayey ‘Dadka u bushaareeya, oo haku adkaynina, u debciya oo hakala firdhinina’
Aadaabta waanada waxa ka mid ah in qofka wacdiga sheegaya u sabro dhibta ka soo gaadha, laakiin haduu qofku didayo marka dhib timaado kaalinta ma qaban karo.
Qofku waa in waanada uu dadka u sheegayo isaga dhaqan u tahay, oo waxuu u diidayo dadka aanu samayn.
Sheekh Dirir ayaa sheegay inay jiraan gefaf dadka wax waaninaya ku dhacaan loona baahan yahay in laga digtoonaado, waxaanu yidhi,
· Dadka inaan wacdi loo sheegin wakhti aanay diyaar ahayn, si aanay u didin
· Waanada waa in loo eegaa sida dadku u qaadi karaan iyo wakhtiyada ku fiican, si aanay dadku uga daalin.
· Qofka wax waaninaya waa inuu iska ilaaliyaa daliilo aan sugnayn iyo axaadiis daciif ah.
· Wacdigu waa inaanu noqon mid majaajilo u eg oo qosolka lagu badiyo, mar loo bishaareeyo mar la cabsi geliyo jannada iyo cadaabaha.
Sheekh Dirir ayaa sheegay in wakhtigan ay jiraan habab loo isticmaali karo wacdiga iyo waanada, si adka loogu gaadhsiiyo, waa agabka adadka qaarkii sharka u isticmaalayo, gaaladuna dhinac xun u adeegsadaan.
Qof walba, madax iyo riciyad, rag iyo dumar, guddo iyo dibed, waa in kelmada wanaagsan dadka gaadhsiiyo, taasoo keeni karta in dad guryahooda jooga oon culimo maqlin ay qaataan.
Dadweynaha, odeyaasha telefishanada soo fadhiisa ee reer hebel iyo qabyaalad ka sheekeeya wacdi iyo waano hadalkood aha u rogaan si Ilaahay SW xasanaad miisaanka uugu saaro. Waanada culimadda keliya lagama sugo laakiin waa xil qof walba kaalin ku leeyahay inuu guto, Ilaahay SW ha innagu anfacee, Aamiin.
Previous articleHargeysa: Aaska Qaran Ee Suldan Maxamed, weedhii Madaxweynaha iyo wixii laga yidhi shakhsiyadda Marxuumka
Next articleDHIBKA SOMALIA EE DOORASHADA MAXAA KEENAY , YAASE KA MASUUL AH ?